Ukuhamba ngeholide kweHolide kukhulisa amanani abakhweli kwisikhululo senqwelomoya iFrankfurt
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Ukuhamba ngeholide kweHolide kukhulisa amanani abakhweli kwisikhululo senqwelomoya iFrankfurt
isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Ukukhutshwa kweendaba • uthutho • Iindaba zeWired Travel
IFraport ifumana imbuyekezo yendyikityha yokugcinwa kwemisebenzi kwisikhululo senqwelomoya iFrankfurt
Ukuthelekiswa no-Agasti ka-2019 kubonisa ukuba ukugcwala kwabahambi be-FRA kwinyanga yokunika ingxelo (ezantsi ngama-51.3 eepesenti) phantse kufikelele kwisiqingatha senqanaba laphambi kobhubhane. Malunga ne-1 yezigidi abakhweli babhabha ngeFrankfurt ngexesha likaJanuwari ukuya ku-Agasti 12.7- ngeholide yehlobo. isizini (ngoJuni ukuya kuAgasti) ithatha ingxelo yabagibeli abamalunga nezigidi ezisi-2021 kuphela. Ngexesha leenyanga ezisibhozo zokuqala zika-8, ukugcwala kwabahambi be-FRA kuye kwehla nge-2021 yeepesenti unyaka nonyaka, xa kuthelekiswa nokwehla kweepesenti ezingama-15.3 xa kuthelekiswa nexesha elinye lokuhamba ngo-73.2.
Amanani ezithuthi eFraport-Agasti 2021:
Isikhululo senqwelomoya iFrankfurt (FRA) samkele abakhweli abayi-3.37 yezigidi ngo-Agasti ka-2021. Oku kubonisa ukwanda ngeepesenti ezili-122.9 kunyaka nonyaka, nangona kusekelwe kuAgasti obuthathaka kakhulu ngo-2020.
Olu hlaziyo lwaluqhutywa ikakhulu kukuhamba kweholide yehlobo ukuya kubakhenkethi baseYurophu, ngelixa i-intercontinental traffic yayihlala iphantsi kakhulu ngenxa yezithintelo eziqhubekayo zokuhamba.
Ukuhamba kwemithwalo ye-FRA (equka ukuthuthwa ngenqwelomoya kunye ne-airmail) igcine ukukhula kwayo ngo-Agasti 2021, inyuka nge-13.3 yeepesenti unyaka nonyaka ukuya kwiitoni ezili-182,362. Xa kuthelekiswa no-Agasti 2019, imithwalo yemithwalo ifumene iipesenti ezi-5.3 kwinyanga yokunika ingxelo. Ukuhamba kwenqwelomoya kunyuke ngeepesenti ezingama-63.3 ukuya kunyaka ukuya kuma-28,897 ukusuka nokuhla emhlabeni. Ubunzima obuninzi bokuthatha ubunzima (ii-MTOWs) bonyuke ngepesenti ye-55.5 ukuya phantse kwizigidi zeetoni ezi-1.8.
Izikhululo zeenqwelo moya kwizikhundla zamazwe aphesheya zeFraport ziye zaqhubeka nokuxela ukuqhuba kakuhle kwezithuthi ngo-Agasti ka-2021. Uninzi lwezikhululo zeenqwelomoya zeQela leFraport liphumelele ukwanda okukhulu, ngenani labakhweli kwizikhululo zeenqwelo moya ezikhuphuka ngaphezulu kweepesenti ezili-100 ngonyaka-nangona zithelekiswa nezomeleleyo kwehliswe amanqanaba ezithuthi ngo-Agasti 2020. Xa kuthelekiswa nendyikityha yangaphambi kuka-Agasti 2019, uninzi lwezikhululo zeenqwelomoya zeQela laseFraport kwihlabathi liphela zisabhalisile amanani abakhweli aphantsi. Nangona kunjalo, ezinye izikhululo zeenqwelomoya zeqela elikhonza kwiindawo zabakhenkethi ezifuna kakhulu (ezinje ngezikhululo zeenqwelomoya zaseGrisi okanye kwisikhululo seenqwelomoya iAntalya kwiTurkey Riviera) zibone ukubuyela kwezithuthi ngo-Agasti 2021 ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 zamanqanaba angaphambi kwengxaki abhalwe kwinyanga enye ngo-2019.
Isikhululo senqwelomoya saseSlovenia iLjubljana (LJU) samkele abakhweli abangama-73,056 ngo-Agasti 2021. Kwizikhululo zeenqwelo moya zaseBrazil zaseFortaleza (FOR) nasePorto Alegre (POA), ukuhlanganiswa kwezithuthi kunyuke kwakhwela kubakhweli abangama-801,187. Kwikomkhulu lasePeru, iLima Airport (LIM) yayinabakhweli abangaphezulu kwesigidi esi-1.1 kwinyanga yokunika ingxelo.
Itrafikhi iyonke kwizikhululo zeenqwelo moya ezingama-14 zaseGrisi zonyuke zaya kufikelela phantse kwizigidi ezi-4.5 zabakhweli ngo-Agasti 2021. Kunxweme lwaseBulgaria kuLwandle oluMnyama, izikhululo zeenqwelo moya zeTwin Star zaseBurgas (BOJ) naseVarna (VAR) zikwachaze ukugcwala okuphezulu kwabantu abangama-629,936. . Isikhululo senqwelomoya iAntalya (AYT) eTurkey sabona ukukhula kwetrafikhi kwaba malunga nezigidi ezi-4.3 zabakhweli. Isikhululo senqwelomoya saseSt. Kwisikhululo senqwelomoya iXi'an (XIY) e-China, izithuthi zacotha zaya kufikelela kwisigidi esi-2.1 sabakhweli.